MacBook inodhura zvakadii? | Ndinobva mac
Li-Mwedzi | | Mac Os X
Kana iwe wakambozvibvunza kuti mitengo yezvigadzirwa inosiyana zvakadii pasirese, iyi posvo ichakufadza iwe; tsvaga kuti imwe inodhura zvakadii MacBook mune dzakasiyana nyika dzepasi.
Zviripachena, iyo mutengo weimwe MacBook MuUnited States, ndiyo yakaderera pane zvese, uye kunyange yakaderera, kana tichiienzanisa neyeSouth Africa kana yeBrazil, semuenzaniso, uko zvimwe zvinhu, zvakaita semutengo wekupinza, zvinogadzira zvigadzirwa, kazhinji, zvinhu zvisingaite kuve inowanikwa nemunhu wepakati nepakati. Nekudaro, mamwe mamodheru anogona kuwanikwa akadhura muHong Kong.
MuSouth Africa (uko mitengo inodhura kwazvo iri, nekuda kwemitero uye kusava nehurumende apuro), a MacBook 13-inch 2.26GHz, zvinodhura zvakafanana ne MacBook 15»Pa2.53GHz muUnited States. Brazil mumwe muenzaniso mupenyu wekuti inodhura sei a MacBookNezvaunotenga imwe muBrazil, unogona kutenga maviri muUnited States, ane hunhu hwakafanana.
Kutaura muzvikamu zvekongiri, muUnited States a MacBook Zvinodhura madhora mazana maviri nemakumi mana nematatu, muBrazil $ 2,499 4,982 madhora; uye kune dzimwe nyika, seMexico, vanotenga madhora zviuru gumi nemazana masere neshanu negumi nemasere emadhora
Musiyano muMacBook Mitengo Pasi Pose
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » MacBook inodhura zvakadii?
Ndinozvidemba kusagovana pfungwa imwe chete newe, kuUSA MacBook inogona kubva ku999 USD kubva kuchitoro chimwe chete. Uye zvekuve mudzidzi akanyoresa muchirongwa chako une imwezve 10% dhisikaundi. Kunze kwekunge iwe uchindiudza nezve Macbook 16 ″ 2T Retina neTouch Bar.
Asi kune vamwe kubva ku999 USD.